के महाधिवेशनमा कांग्रेस भित्र जोडतोडले उठ्ला हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा ? - Hello Patrika
धर्मविशेष • प्रमुख समाचार • राष्ट्रिय • विचार
नेपालको राजनीतिको पूरानो, लोकतान्त्रिक र ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठ्नुले विशेष महत्व राख्दछ तर यसका लागि हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा महाधिवेशनमा नै चर्को रुपमा उठ्न जरुरी छ । कांग्रेसको महाधिवेशनमा जति चर्को स्वरमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठ्छ । यो राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चाको विषय बन्नेछ । यसले हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरहरुलाई एकठाउँमा उभिनु पर्ने वातावरण बनाउन सक्छ । किनभनें नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिका विरोधीहरुले निरन्तर आफ्ना गतिविधिहरु खुलमखुला र निर्वाध रुपले गरिरहेका सन्दर्भमा हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरहरु एकठाउँमा उभिने वातावरण बन्नु आफैंमा सुखद हुनेछ ।
भदौ २७, काठमाडौं । महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा पुनः उठ्न थालेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि कांग्रेसभित्र सुषुप्त रूपमा यो मुद्दा उठ्दै आएको छ । हिन्दूराष्ट्रको मुद्दालाई महाधिवेशनमा एजेन्डा बनाउने केही नेताको तयारी रहेको समाचारहरु बाहिर आउन थालेका छन् । २०६३–०६३ को आन्दोलन पछि हठात् रुपमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षताले नेपाली राजनीति धेरथोर तातिरहेकै थियो । कमल थापा नेतृत्वको तत्कालिन राप्रपा नेपालले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दालाई राजनीतिककरण गरेर जस लिन खोजे पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन ।
अहिले नेपाली कांग्रेस भित्र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी लगायतका नेताहरुले सनातन हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई उठाउँदै आए पनि पार्टि भित्र बलियो वहश भनें हुन सकेको छैन । हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शशांक कोइरालाले पनि समयसमयमा उठाउँदै आएका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा बेलाबखत उठाउने गरे पनि एजेन्डाकै रूपमा भने उठाएका छैनन् । तर, उनले महाधिवेशनमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा एजेन्डाका रूपमा उठ्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले पार्टीभित्र र बाहिर हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बहस चलाएका थिए । तर, उनको निधनपछि उक्त मुद्दा पार्टीमा मलिन रूपमा उठे पनि त्यसले दबाब सिर्जना गर्न सकेन ।खड्कानिकट केन्द्रीय सदस्य भण्डारीलगायत नेताले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
काठमाडौंमा दुई वर्षअघि सम्पन्न महासमिति बैठकमा सहभागी १ हजार ४ सय सदस्यमध्ये करिब ७ सयले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, डा. शेखर कोइरालालगायतले पनि धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने माग चर्काे रूपमा उठाएका थिए । यसअघि मौसमी रूपमा कांग्रेसमा धर्मको विषयले चर्चा पाउँदै आए पनि महाधिवेशन नजिकिएसँगै शीर्ष नेता हिन्दूराष्ट्रका विषयमा बोल्न थालेका हुन् ।
समय समयमा नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा नेता कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि देखाएका छन् । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ, बीपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी कार्यक्रममा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पनि ‘धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दूराष्ट्र अहिले गर्न मिल्छ वा मिल्दैन तर हिन्दू बाहुल्य मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा नेपाली कांग्रेसको मान्यतामा थियो । बीपी कोइराला, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाबाबुलाई सम्झिँदै कांग्रेसले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेका थिए । उनले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा निर्णय गर्न कांग्रेसले ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताएका थिए ।
कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा खुलेर बोल्ने नेता कम भए पनि तल्लो तहमा भने संख्या ठूलो छ । अहिले पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलगायत नेता पनि हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा खुल्न थालेका छन् । महाधिवेशनमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठे त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा कांग्रेस पार्टी भित्रै भने छलफल भएको छैन । कतिपय नेताले महाधिवेशनअघि नै हिन्दूराष्ट्रका बारेमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका नाममा मिशिनरीहरुको अन्धधुन्द धर्म प्रचार गर्न थाले पछि धार्मिकजनका साथै राजनीतिक नेताहरुले पनि देश विरुद्ध षडयन्त्रकै रुपमा योजनाबद्ध रुपमा धर्म परिवर्तन हुन थालेको प्रति आशंका गर्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा कांग्रेसमा पनि हिन्दूराष्टको पक्षमा आवाज उठ्नु स्वाभाविक भए पनि महाधिवेशनमा मुख्य एजेण्डाको रुपमा उठ्छ कि उठ्दैन चासोको विषय बनेको छ । (रबिराज रिमाल)
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र बागलुङको जैमिनीमा पहिरो